Manchester City oo guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Newcastle United kulankooda afaraad ee Prenier League – Gool FM
Manchester City oo guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Newcastle United kulankooda afaraad ee Prenier League
CR Shariif September 1, 2018
(Premier League) 01 September 2018. Manchester City ayaa dib ugu soo laabatay markale wadada guusha, kadib markii kulankii lasoo dhaafay ay gashay barbaro, balse kulankan ayaa waxay guul muhiim ah kaga gaartay Newcastle United 2-1, kulankooda afaraad ay kuwada ciyaareen horyaalka Prenier League.
Kooxaha Manchester City iyo Newcastle United ayaa kulankan ku bilaawday qaab ciyaareed aad u cijiib ah, waxayna labada dhinac midba mida kale ay sameesay isku day ay ku doonayeen inay shabaqa ku gaaraan.
Wiilasha Pep Guardiola oo kulanka si aad ah u doonayay inay natiijo wanaagsan ka gaaraan ayaa waxay dhaliyeen goolka daah furka isla bilawga ciyaarta gaar ahaan daqiiqada 8-aad wanaana u dhaliyay Raheem Sterling oo caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis Benjamin Mendy ciyaarta ayaana noqotay 1-0.
Laakiin Newcastle United ayaa isla qeybta hore ee ciyaarta awooday inay hesho goolka barbaraha waxaana u dhaliyay daqiiqadii 30-aad DeAndre Yedlin oo goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Salomon Rondon ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay barbaro 1-1.
Cayaarta ayaa qeybta hore ay ku kala mareen kooxaha Manchester City iyo Newcastle United barbaro 1-1 ah.
Dib markii loogu soo laabtay qeybta labaad ayay kooxda Manchester City oo ka faa’ideysaneysa gudaha garoonkeeda Etihad Stadium iyo jamaahiirteeda kulanka kusoo gashay qaab weerar cajiib ah, si ay u keensadaan goolka labaad ee ciyaarta.
Difaca reer England ee Kyle Walker ayaa gool qurux badan kaga fujiyay kooxdiisa Manchester City daqiiqadii 52-aad kadib markii uu caawin ka helay Sergio Aguero ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 2-1.
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa waxay kusoo idlaatay 2-1 ay guusha ku raacday kooxda Manchester City oo ku ciyaareesay garoonkeeda Etihad Stadium, waxayna guushaan muhiim u ahayd Pep Guardiola oo doonaya in uu tartanka difaacdo.
Shaxda rasmiga ah ee Parma vs Juventus (Paulo Dybala oo keydka fadhiya)
Shaxda rasmiga ah ee Real Madrid vs Leganes (Thibaut Courtois oo ku soo bilowday)